MUCAARID XUN IYO MAAMUL XUN TARTANKOODA WAXA KU LUNTA DANTA GUUD . W/Q HAMUD DUALE
Mucaarid xun iyo maamul xun tartankooda waxaa ku lunta danta guud.
Tola’aanta iyo Gacala’aanta haysata Adeega Dadweynaha
Sedexda xusbi qaran een Somaliland col iyo abaari agtooda masiibo qaran kama ah. Macalluusha iyo gaajadu agtooda masiibo qaran kama ah. Adeega iyo daryeela’aanta caafimaadku agtooda masiiba qaran kama ah, Dhallinyarada quusta iyo rajala’aanta ismiidaaminaysa ee tahriibaysaa agtooda masiibo qaran kama ah. Waxaa agtooda masiibo qaran ah doorashada iyo dimoqraadiyada la isku beer laxawsado.
Waxaynu wada ognahay, waxaa had iyo jeer laga hadalaa oo loo arkaa masiibo qaran ismaandhaafka siyaasadeed ee joogtada noqday, ee sedexda Xisbi qaran. Ismaandhaafkaasi dalka wuu wada dhameeyaa. Taageerayaashu weerar iyo difaac bay galaan, markuu mid soo gabgabooba mid hor leh, ayaa bilaabma. Golayaasha Qaranka ayuu gaadha, go’aamada ka soo baxa ayuu muran cusubi ka dhashaa. Waa la iskaga gudbaa, Xeer jajab ayaa miiciin la moodaa. Gogol baa la dhigaa, Guddiyo heshiisiin iyo xeerbeegti ayaa loo saaraa, si go’aamo lagaga badbaado masiibadaa qaran ay u soo saaraan. Taageerayaasha iyo wakiilada xusbiyadu waxay garaacaan albaabada beelaha caalamka ee aqoonsiga laga doonayo, isaga oo mid waliba ka dhaadhicinayo in xusbigoodu xaqii iyo jidkii dimuqraadiyada ku taagan yahay, ka kalana uu qardo jeexayo. Waa yaab.
Halkaa waxaa ku luma oo tol belay oo ku gacal waaya oo aan manta xidid iyo xigaal midna aan lahayn adeegii danyarta loo fidin lahaa, waxaa meesha ka baxa masiibooyinyaka dhabta ah ee qaranka in meel looga soo wada jeesto. Waxaa meesha ka baxa masiibooyinka badan ee dawladaha laga samaystay in guddiyo ka soo taliya loo saaro oo xiitaa wixii jira in la wada dareemo oo laga shiraa waa sed, qaylo dhaan in caalamka loo jeediyaa waa waxtar.
Qaylo dhaanta caalamka loo jeedinayo markay murmaan sedexda xusbi, meelo badan oo kale ayaa looga baahan yahay.
Imisaa qaran ku soo duntey Mucaaradad tuur leh iyo maamul isku bogey. Maxaa dan ah maxaa daran haddii la isweydiiyo waxba kuma jabna. Maxaa samada dadkii ku wada faruur xidhay ee dantii ummadda ay uga weynaata cidda kusiga ku fadhida amma dooneysaa in ay ku fadhiisato? Maxay iskaga mid yihiin sedexda xusbi qaran maxay ku kala duwan yihiin? Sidaynu uga gudubnaa barnaamijka ay ka midaysan yihiin ee aan dan gaar ah mooyee dan guud ku salaysnayn? Yaa adeegii dadweynaha iyo danyarta xidid iyo xigaal u noqon kara?
Wuu socdaa, waa innoo todobaadka danbe
This entry was posted on May 24, 2009 at 12:14 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.